अशोकको पहिलो गीत “मन बिना को धन ठुलो कि धन बिनाको मन” रिलिज भयो – Aawaj Media
अशोकको पहिलो गीत “मन बिना को धन ठुलो कि धन बिनाको मन” रिलिज भयो
Home /समाचार/अशोकको पहिलो गीत “मन बिना को धन ठुलो कि धन बिनाको मन” रिलिज भयो
काठमाडौँ। बालगायक अशोक दर्जीको पहिलो गीत ‘मन बिनाको धन ठुलो की धन बिनाको मन’ बुधबार सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँको पुतलीसडकस्थित ‘स्टुडियो नाइन’मा आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा उक्त गीतको म्युजिक भिडियो रिलिज गरिएको हो। गीत रिलिज गर्न बालगायक प्लेन चढेर झापाबाट काठमाडौँ आएका थिए।
गीतमा बिराज नेपालको शब्द रहेको छ भने सङ्गीत गायक तथा सङ्गीतकार टंक बुढाथोकीको रहेको छ। म्युजिक भिडियोमा दर्जी आफैले अभिनय गरेका छन् । हेर्नुस् भिडियो।
अशोक दर्जीको स्कुल पुग्दा खुशीले गदगद् भए टंक !
अशोक दर्जी बाबुको स्कुल पुग्दा खुशी लाग्यो | सबैको पहिलो चाहाना अशोक बाबुले पढ्नु पर्छ ज्ञानी बन्नु पर्छ हो त्यसैले हामीले गीत रिलिज भन्दा पहिला हाम्रो अशोकको आधारभूत कुराहरु पुरा गर्न तर्फ़ कोशिस गरिरहेका छौं |
स्कुल को पढाइको लागि सबै जिम्मेवारी BETHEL EDUCATIONAL ACADEMY उर्लाबारी का दिपक नेउपाने सर ले जिम्मा लिनुभएको सोहि अनुसार अशोकले पढ्न सुरु गरिसकेका छन् हामि सबै को तर्फबाट दीपक सर लाइ धन्यबाद दिन चाहान्छौं |
अब अशोक बाबुको परिवारको अवस्था ज्यादैनै कमजोरी भएका कारण हामी सकेसम्म चाडो घर निर्माण मा लागिरहेका छौं हजुर हरु सबैलाई सहयोगका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं | गीत हामी अबको हप्ता हजुरहरु सामु लियाउने जानकारी पनि दिन चाहन्छौं |
अशोक दर्जी आफ्नो गित रेकर्ड पछी घर पुग्दा जे देखियो (भिडियो)
उर्लाबारी। सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेका झापा दमकका अशोक दर्जीको पहिलो गीत रेकर्डिङ भएको छ । मन बिनाको धन ठूलोकी धन बिनाको मन बोलको गीत केही दिन अघि मात्र रेकर्डिङ भएको हो ।
गायक टंक बुढाथोकीको सङ्गीतमा गीतको रेकर्ड भएको हो । केही दिनभित्र नै गीत सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको अशोकका सहयोगी रुपकले जानकारी दिएका छन् ।
पहिलो गीत रेकर्ड गरेर घर फर्केका अशोकलाई परिवारले न्यानो स्वागत गरेको छ । आफ्नो छोराको पहिलो गीत रेकर्ड भएकोमा आमा बुबाले खुसी व्यक्त गरेका छन् । सबैको साथ सहयोग भएमा भविष्यमा अशोक सफल गायक बन्ने उनका बुबाले बताएका छन् । एक हप्ता अघि अशोक गीत रेकर्डिङका लागी काठमाण्डौ गएका थिए ।
पछिल्लो समय सामाजिक संजाल त्यसैगरी युटुवहरुमा भाइरल बनिरहेका झापा दमकका बालगायक अशोक दर्जी बिहिबारबाट विद्यालय जान थालेका छन् । अदभूत गायन क्षमताका कारण, छोटो समयमा नै चर्चामा रहेका उनलाई उर्लाबारीमा रहेको बेथेल एजुकेशन एकेडेमीले १० कक्षासम्म निःशुल्क पढ्ने र बस्ने व्यवस्था मिलाएको हो । अशोकसँगै उनका दुई बहिनीहरुको पठनपाठनको जिम्मा पनि सोही विद्यालयले लिएको छ ।
आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण नै उनले दुई कक्षासम्म मात्रै पढ्न सकेका थिए । उनलाई स्कुल लगाउने कार्यमा पत्रकार किसोर श्रेष्ठ, विवेक हिङमाङ, ममता राना लगायतले महत्वपूर्ण भूमीका निर्वाह गरेका थिए । आफ्नो छोरालाई पुनः स्कुल जाने अवसर मिलाइ दिएकोमा अशोकका बुबाले सहयोगी सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । १० कक्षासम्म पढ्ने इच्छा रहेको अशोकले बताए । विद्यालयको पहिलो दिन विद्यार्थी र शिक्षकले अशोकको भव्य स्वागत गरेका थिए भने अशोकले गीत गाएर सुनाए ।
गायक हेमन्त रानाको ‘सुन साइली’ दुरुस्त गाउने उनी अर्का बालगायक प्रेम परियारको ‘मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन’, ‘यी आखाँमा तिमी छौ’ जस्ता गीतहरु उत्तिकै मिठासपुर्ण स्वरमा गाउँछन् । शब्दमा भने केही कन्फुयज देखिने उनको गाउने शैली भने रोचक रहेको छ । विपन्न परिवारका उनको भविस्यमा सफल गायक बन्ने लक्ष्य रहेको छ । विशेष गरेर सामाजिक संञ्जाल र युटुवहरुमा उनको लोकप्रियता बढ्दो छ ।
झापाको दमकमा रहेको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा गीत गाएर आफ्नो अनि परिवारका लागी जिविको पार्जनका लागी पैसा संकलन गर्दै आएका उनी जम्मा भएको पैसाले परिवारमा नुन, तेल, चामल जस्ता खाद्यान्न खरिद गर्दथे । केही महिना अघिसम्म झापाको केही शहरहरुमा मात्रै सिमित रहेको उनको प्रतिभाले यतिबेला देशमा मात्र नभर बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको पनि मन जित्न सफल भएको छ ।
-अशोकका आमा बुबा / मेयर,उपमेयर सम्म पुगे अशोकलाई साथ दिन !
दमक नगरपालिको मेयर
राष्ट्रिय कलाकारलाई स्वरमा टक्कर दिने झापाका रबिन दर्जीको घरमा पुग्दा जे देखियो, आमाको आग्रह भिडियो :
को हुन् अशोक ?
-झापाको गल्लि गल्लीमा आफ्नो कला देखाएर पैसा जम्मा गरी छाक टार्ने अशोक दर्जीको पुरा हुदै गायक बन्ने सपना !
पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा भाईरभएका अशोक दर्जीले आफ्नो पहिलो गितको रेकडीङ सकेका छन ।
सानो उमेरमै नीकै राम्रो प्रतिभा प्रस्तुत गरीरहेका दर्जीको भिडियोहरु एकाएक सामाजिक संजालको माध्यम बाट चर्चामा आउन थाल्यो ।
निम्न परीवारमा हुर्कीदै गरेको दर्जीले बाटामा,होटलमा गित गाउथे र जम्मा भएको रकमले परीवारको सामान्य आबश्यक्ता धान्थे । उर्लाबारी फोकस टिभीको अन्तरवार्तामा उनले आफ्नो प्रतीभाहरु प्रस्तुत गरेका थिए जुन सामाग्री युटुबको ट्रेडीङमा रहिरहेको छ ।
तेस्तै उक्त युटुब च्यानलले उर्लाबारीमा अशोक दर्जी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । त्यस पछि उनलाई सहयोगी हातहरु अघि बड्न थाल्यो । उनले पढ्न पनि पाए साथ साथै उनको गाएक पन्ने सपना पनि साकार हुने भयो ।
झापाका डिजे रुपकको सहयोगमा मन बिना को धन ठुलो कि धन बिना को मन बोलको गित रेकडीङ गरे उक्त गितलाई टंक बुढाथोकीले संगीत भरेका छन । भिम नेपालको म्युजिकमा तयार पारीएको गितको रेकडीङ भने काठमाण्डौ पुतली सडकमा रहेको स्टुडीयो9मा गरीएको छ ।
उनको पहिलो रेकडीङ भिडियो:
अशोक दर्जीको घर पुग्दा :
-यो पनि पढ्नुहोस /हेर्नुहोस :
फेरिदै दर्जीको जिन्दगि/राष्ट्रिय कलाकारलाई टक्कर दिने दर्जीको गीत रेकर्ड गर्न काठमाडौं आउदै
माेरङ / झापाको दमकका १२ बर्षीय रबिन दर्जी (अशोक) अहिले युटयुव र सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएका छन । नेपालमा चलेका गायकहरु सँग दाँजेर उनको स्वरलाई सार्बजनिक गरिएपछि उनको चर्चा चुलिएको छ । सुकुम्बासी परिबारमा जन्मिएर हुर्किएका बालक दर्जीका बुबा ज्याला मजदुरीमा काम गर्छन । खोलको छेउमा रहेको उनको सानो फुसको छानो भएको घरमा उनको भेट्न जानेको लर्को समेत बढेको छ ।
झापाको दमक र मोरङको उर्लाबारी आसपासका क्षेत्रमा रहेका होटल तथा फुटपाथमा गित गााउदै हिँडने बालक दर्जी एकाएक सेलिब्रेटी बनेका छन । उनी केही नेपाली र केही हिन्दी गितहरु जस्ताको त्यस्तै गाँउछन । उनको स्वरमा अदभुत जादु रहेको छ । उनै बालक दर्जी सँग गरिएको कुराकानी :
यो पनि :राष्ट्रिय कलाकारलाई टक्कर दिने झापाका ८ बर्षका बालक !
दमक । लुकेका प्रतिभाहरूको खोजी र अनुसन्धान तथा तिनीहरूलाई राष्ट्रिय जीवनमा चिनाएर उचित कदर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अघोषित रुपमा सबैको हो । अवसर नदिएसम्म लुकेका प्रतिभा बाहिर ल्याउन सकिन्न । यस्तै एकजना बालक आफ्नो गलाको उचित मूल्याङ्कन गरिदिनेको खोजीमा भौतारिरहेका छन् ।
नेपालमा यस्ता प्रतिभा छन् जुन कुना–कुनामा लुकेका छन् । त्यस्ता प्रतिभालाई बाहिर ल्याउन कहि कतैबाट खासै पहल भएको चाहि पाईदैन । बरु पहुँचवाला र शहरबजारमा बिभिन्न प्रतियोगिताकै आयोजना हुने गरेको छ । तर ग्रामिण भेगमा रहेकाहरुको कला र गला त्यसै मरिरहेको छ । झापा दमकस्थित बेलडाँगीको एक होटलमा भेटिए ९ बर्षिय रबिन दर्जी । हामीसँग भेट्ने बित्तिकै निक्कै उत्साहित बनेका उनी हामीलाई यसरी गित सुनाउन थाले
पछिल्लो समय युट्युव च्यानल प्रतिभा भएकाहरुका लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म सावित भएको छ । गायन होस् या नृत्य धेरैले आफ्नो कलालाई राख्ने सरल माध्यम युट्युव भइदिदा लुकेका प्रतिभा बाहिर उजागर भएको पाइन्छ । बेलडागीमा बुवा बिष्णु र आमा ललिता भने बनीबुतो गरेर आफ्ना छोराछोरीको लालनपोषण गराईरहेका छन् । ५ दिदिबहिनीको एक मात्र माईती आफु नै भएको र भविष्यमा गएर ठुलो गायक बन्ने सपना बोकेका रबिन अवसरको खोजीमै छन् ।
यहाँ लुकेका प्रतिभा धेरै छन् तर उनीहरुको पर्वाह छैन । बेला बखत गाउघरमा हुन गरेको पूजा बिबाह त्यसैगरि पुराणमा यि ९ बर्षिय बालक रबिनको खुबै खोजी हुन्छ । उनलाई केहि रकम पनि दिन्छन् त्याहा । तर उनको रहर पुरा गरिदिन कसैको ध्यान पुगेको देखिदैन । उनी गायनमा यति रम्न चाहान्छन् कि उनी हरबखत गित सुनाएर जो कसैलाई पनि मन्त्रमुग्ध बनाईदिन्छन् ।
प्रत्येक मानिससँग, प्रत्येक चिजवस्तुहरूसँग केही न केही कुरा, कुनै न कुनै कुरा लुकेको हुन्छ । अथवा कारणवश लुकाइएको हुन्छ वा लुकाउन बाध्य पारिएको हुन्छ । ती लुकेका वा लुकाइएका कुरा खोतल्न अरुले प्रयास गर्दैनन् । र गर्नेहरूले बुझ्दैनन् ।
बुझ्नेहरूमध्ये आधाले बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरिदिन्छन् । आधाले वेवास्ता गर्छन् । अनि यसरी नै कलिलो प्रतिभा मर्न बाध्य हुन्छ, फूल बन्नु अगावै मरेको कोपिलाझैं । उड्न नपाउँदै खोल्यासबाट खसेको चरा जस्तै ।
–यो पनि पढ्नुहोस/हेर्नुहोस :
उद्घोषण गर्दै गरेकी चर्चित नायिका निशालाई हटाएर आफै उद्घोषण गर्ने बुटवलका ६ बर्षिय क्रिजन /हेर्नुहोस भिडीयो सहित
काठमाडौं/निशासंगै उद्घोषण गर्ने बुटवलका ६ बर्षिय क्रिजनले सवैलाइ चकित पारे ।अभिनेत्री निशा अधिकारीले उद्घोषण गरिरहेको बेला ६ बर्षिय वालक स्टेजमा पुग्छन । बडिगार्ड सहित स्टेजमा चढेका वालकसंग निशाले कुराकानि गर्दै तपाइ यहाँ किन आउनु भएको भनेर प्रश्न गर्छिन । म जुन कार्यक्रममा जान्छु त्यो कार्यक्रमको सचालन आफै गर्छु’- वालकले जवाफ दिन्छन । निशा स्टेजबाट बाहिरिन्छिन अनि वालकले कार्यक्रम संचालन गर्छन । तपाइलाइ लाग्न सक्छ यो कुनै फिल्मको दृष्य हो ।
दृष्य फिल्मी स्टाइलको भएपनि ६ बर्षिय वालकको प्रस्तुति भने वास्तविक हो । बुटवलमा माघ १ गते सम्पन्न भएको एकल नृत्य प्रतियोगिता ‘अल नेपाल डान्स च्याम्पियनसीप’मा सहभागिहरुलाइ (जुनियर तर्फ ) प्रस्तुत गर्न स्टेज चढेका क्रिजन गौतमले सवैलाइ चकित पारे । उनको उद्घोण शैलि देखेर दर्शक मात्र होइन भारतको मुम्वईवाट निर्णायकको रुपमा आएका चर्चित नृत्य प्रशिक्षक टेरेन्स लुईस समेत प्रभावित भए । प्रतियोगितको विजेतालाइ मुम्वइमा प्रशिक्षणको लागि लैजाने घोषणा गरेका लुइसले क्रिजनको प्रतिभाबाट प्रभावित भएर १ महिना निशुल्क प्रशिक्षणकोलागि मुम्वइ लैजाने घोषणा गरे ।
कार्यक्रमको उद्घोषण गर्न आएकी अभिनेत्रीले निशाले समेत उनको खुलेर प्रशंसा गरिन । आफ्नो उद्घोषण कला प्रस्तुति पछि क्रिजनले नृत्य पनि प्रस्तुत गरे । उनको उद्घोषण र नृत्य हेरिसके पछि दर्शकहरु भन्दै थिय- यो कान्छाले भविश्यमा तहल्का मच्चाउँछ ।
गणपति मिष्ठान बुटवलका संचालक, युवा ब्यवशायी किशोर गौतम र निशा गौतमका सुपुत्र हुन क्रिजन गौतम । उनि अहिले ६ वर्षका भए । सानै देखि नृत्यमा रुचि राख्ने क्रिजन एपेक्स स्कुल शंकर नगरमा अध्यन गर्छन । विद्यालयमा नृत्य प्रस्तुत गरेर चर्चामा आइरहेन उनलाइ किशोरले एक दिन साथिको छोराको भातखुवाइमा लगे । अत्यन्त फुर्तिलो स्वभावका क्रिजनले त्यहाँ नृत्य र अभिनय गरेर सवैलाइ चकित पारेको किशोर सम्झन्छन ।
उक्त कार्यक्रममा रहेका एक नृत्य निर्देशकले क्रिजनलाइ वागेश्वरी संगितालयमा नृत्य प्रशिक्षणको लागि पठाउन सुझाव दिए र किशोरले पनि त्यसै गरे ।
यसरी सुरु भयो क्रिजनको नृत्य यात्रा । उनि नृत्यमा मात्र होइन उद्घोषण र अभिनयमा समेत अब्वल छन । बागेश्वरी संगीतालय बुटलका प्रिन्सिपल सुरेश सेन्चुरीले क्रिजनमा राम्रो क्षमता भएको बताउँछन । ‘कोही नाच्न जानेका हुन्छन बोल्न जान्दैनन्’- सेन्चुरीले सुनाए –’क्रिजनमा बहुप्रतिभा छ ।’
सोही प्रतिभाको कारण ‘अल नेपाल डान्स च्याम्पियनसीप’का निर्णाय विजु पार्कि लगाएतको टिमले कार्यक्रमको फाइनलमा क्रिजनलाइ उद्घोषकको रुपमा स्टेजमा उतार्ने निर्णय गरे । प्रतियोगिताको टप १४ सम्म पुग्न सफल क्रिजनले आयोजकले गरेको निर्णय स्विकार गर्दै कुशल ढङगले कार्यक्रम संचालन गरे । उनि यि विधामामात्र नभएर पढाइमा पनि राम्रो रहेको उनका वुवा किशोर गौतम बताउँछन । क्रिजनले बुटवलमा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुमा पनि आफ्नो नृत्य प्रस्तत गर्दै आएका छन भने सत्य साइकला केन्द्रले सम्मपन्न गरेको प्रिन्सप्रिन्सेस कार्यक्रममा भ्युवर च्वाइसको अवार्ड थापि सकेका छन् ।
क्रिजनको प्रस्तुति हेरपछि निर्णायकको रुपमा बुटवल आएका टेरेन्स लुइसले खुलेर प्रशंसा गरे । उनले भने- ‘क्रिजन तिमीमा महान कलाकारको आत्माले वास गरेको छ भविश्यमा सुपर स्टार बन्न सक्छौ ।’ लुइसले उनको कलाबाट प्रभावित भएर भारतको मुम्वइ स्थित आफ्नो प्रशिक्षण केन्द्रमा १ महिना निशुल्क प्रशिण दिने बताएको किशोर गौतमले जानकारी दिए । उनले भने –’वावुको स्कुलका सरहरुले पनि क्रिजनलाइ यो क्षेत्रमा अघि बढाउनु पर्छ भनेर सुझाव दिनु भएको छ उसलाइ मुम्वइमा प्रशिक्षणको लागि लैजादै छु ।
(नोट : माथी उल्लिखित सामाग्री केहि समय अघि नै प्रकाशन भै सकेको भए तापनि हाम्रो नेपाली साना-साना नानी वावुहरु छोरा/छोरीहरुलाई पनि अवसर दिने हो भने के सम्म गर्न सक्दो रहेछन् भन्ने उदेश्यले पुनः सम्प्रेषण गरिएको हो !
काठमाडौं,माउन्ट भिउ इंगलिस बोर्डिंग, बालकोट भक्तपुर स्कुल कक्षा ७ मा पढ्ने अंकित संग्रौला नामक एउटा सानो भाइले “बिज्ञान अभिषाप होइन, वरदान हो ।” भन्ने बिषयमा केहि समय अघि आफ्नो धारणा ब्यक्त गरेको भिडियो नेपाली साइबर जगतमा निकै भाइरल बनेको थियो | आज पनि उस्तै गरी अर्को रुवाउने भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् –
क्रिश्चियन धर्म माने जागिर लगाई दिने भन्दै चर्च पुर्याए पछी (भिडियो)
विश्वलाई नै चकित पार्ने अर्को बिकासको चमत्कार गरेर देखायो चिनले, २० बिलियन डलर भन्दा बढी लागतमा मात्र ९ वर्ष खर्चेर समुन्द्र माथिबाट हंगकंग-चिन र मकाउ जोड्ने ६ लेनको विश्व कै ५० किलोमिटर लामो पुल निर्माण सम्पन्न, यहि जुलाई १ तारिखबाट सर्बसाधारणका लागी खुला हुदै (फोटो र भिडियो सहित)